गुल्मीको तीज कहाँ कस्तो भयो? हेरौँ भिडियोहरु – Gulminews
Home/भिडियो/गुल्मीको तीज कहाँ कस्तो भयो? हेरौँ भिडियोहरु
गुल्मीको तीज कहाँ कस्तो भयो? हेरौँ भिडियोहरु
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ भाद्र २७, बुधबार २३:२६ मा प्रकाशित
नेपाली महिलाहरुको पर्व हरितालीका तिज गुल्मीमा पनि हर्षोल्लासका साथ मनाईएको छ । महिलाहरु बिहानैदेखी सौभाग्य सुचक धागोपोते, टीका गरगहना, रङ्गीचङ्गी कपडा, पहिरेर विभिन्न शिवमन्दिरहरु तथा मैदानमा भेला भएर नाचगान गरेर मनाएका छन् ।
तिज पर्वको अबसरमा गुल्मी जिल्लाका बिभिन्न स्थानहरुमा भेला भएर बिबिध कार्यक्रमहरु सहित धुमधामसँग मनाईएको हो ।
गुल्मीको तीज कहाँ कस्तो भयो? हेरौँ भिडियोहरु:
भुवाचिदीको तीज । भिडियो: रबिलाल पौडेल
तम्घासमा देखियो यस्तो कमेडी नाच । भिडियो: नेपाल अप्डेट
ईश्माको तीज । भिडियो: सिद्धार्थ डिजिटल